Inona no mitranga rehefa ambany electrolytes ny vatanao? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Potasioma sy electrolytes - ny fomba hahatratrarana
Potasioma sy electrolytes - ny fomba hahatratrarana
Inona no mitranga rehefa ambany electrolytes ny vatanao?
Rahovianany vatanaolasaambany amin'ny electrolytes, mety hanimbany vatanaoasa, toy ny fampidiran-dra, ny fihenan'ny hozatra, ny fifandanjana asidra ary ny fifehezana ny tsiranoka.nyny fo dianyhozatra, ka midika izanyelectrolytesmanampy mifehynyfitepon'ny fony.
Zyrowski avy amin'ny Nuvisionexcel.com.
Raha vaovao amin'ny fantsona ianao dia mahafinaritra anao foana ny manana anao eto. Amin'ny lafiny rehetra, misoratra anarana, kitiho ilay fampandrenesana kely ary hanampy anao hanatsara ny fahasalamanao sy ny fiainanao aho. Amin'ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny soritr'aretin'ny tsy fahampian'ny electrolyte isika, rehefa mijery electrolytes dia misy soritr'aretina maro samihafa izay mipoitra, manontany am-pahasalamana isika amin'ny klinika mba hamaritana raha mety misy olona tsy ampy electrolyte.
Ka ho hitantsika ireo ary horesahiko tsirairay izy ireo satria, toa ny noresahako tao amin'ny lahatsoratra iray hafa, mety nanana ny soritr'aretina tsy fahampiana elektrolita aho satria nitazona tena ny tsy fahampian-tsakafo taorian'ny nandehanako tamin'ny sakafo karbôtika ambany nandritra ny taona maro, ela be talohan'ny keto dia nangatsiaka sy navesatra be aza, ary koa ny fiofanana amin'ny fifadian-kanina miserana sy ny endrika fifadian-kanina hafa. Ankehitriny, maro ny olona tsy mahalala ny manana olana mitovy satria miaraka amin'ny fifadian-kanina miserana, sakafo ketogenika, ary fanaovana fanatanjahan-tena, maro ny olona koa no miaina fihenan-danja haingana izay miteraka tsy fahampian'ny electrolyte. Ka raha mijery ireo electrolytes ireo isika dia mety hanimba ny vatantsika izany.
Noho izany, andao aloha hanontany ireo fanontaniana isan-karazany azonao atao ny manontany tena raha toa ka miatrika an'io. Ny voalohany eto dia ny fiaretana hozatra tsy dia tsara. Noho izany, olona mandeha any amin'ny gym ve ianao ary mahatsapa fa na dia miasa mafy sy manao asa mafy aza ianao, tsy manana ny tanjaky ny fanaovana repotra be loatra amin'ny lanjanao na karazana karazana mihitsy aza. halavirana lavitra Manao kardio satria ratsy be ny tanjakao.
famerenana bisikileta mamirapiratra
Eny, misy vintana lehibe mety tsy fahampian'ny electrolyte anao. Azo antoka fa ho ahy izany. Ataovy an-tsaina foana izany.
Ny zavatra manaraka dia ny fihenan'ny hozatra. Raha izany, raha hozatra na hozatra, na hozatra, dia izy ireo. Ny fikolokoloana hozatra dia matetika miseho amin'ny vondrona hozatra kely kokoa, toy ny manodidina ny maso, manodidina ny vava, angamba amin'ny tongotra, ary zavatra toy izany.
Fa raha mahazo zavatra toy izao ianao, dia mety ho olana aminao ny tsy fahampian'ny electrolyte, ary izany zavatra izany no nifohazako tamin'ny misasakalina niaraka tamin'ny crampes ka tsy azoko natao intsony. Ary mba afaka milaza aminao indray aho fa hitako ny ankamaroan'izy ireo teto. Manaraka izany dia mangetaheta matetika kokoa.
Tena mahaliana ity satria araka ny nohazavaiko dia ny fahatsapanao fa telopolo taona monja ianao dia tsy maintsy misotro rano betsaka nefa avy eo manomboka misotro ny rano ianao ary mieritreritra ianao fa tsy mila rano aho, nisotro aho efa ampy, fa avy eo dia vonoinao ny rano dia maty ny eritreritrao, wow, telopolo taona tokoa aho. Ka izany dia karazana zavatra mahasosotra, fa rehefa tsy ampy elektrolitanao dia izao no mety hahatsapanao ary tsy miraharaha izay ataonao ianao, toa tsy tena mampinono. Manaraka izany dia mivoaka matetika ny fivalanana.
Zavatra tena mahaliana ity satria nanana tovolahy tena tanora aho tamin'ny roa-polo taona nanatona ahy ary ny iray amin'ireo fitarainana lehibe nataony dia ny hoe, lehilahy mihazakazaka mankamin'ny fandroana tontolo andro aho ary avy eo mihazakazaka mankamin'ny fandroana mandritra ny alina ihany koa, ianao fantaro, imbetsaka. Fantatrao fa tanora izy ka tsy mieritreritra ny prostaty eto, fa mieritreritra izahay, okay, ity dia olona mihinana sakafo ketogenika, olona manao tsara ny zava-drehetra ary manao fanatanjahan-tena. Eny, nivadika ho tsy fahampiana electrolyte io.
Raha vantany vao nahavita izany izy, dia nahavita nampihena ny fitsidihany tany an-kabone sahabo ho 70%. Ary noho izany ny fivalanana matetika dia olana eto. Ary fantatrao fa ireto roa ireto miharihary fa miara-milalao, mangetaheta matetika kokoa, matetika ny fivalanana, fa ny fivalanana matetika dia tena mahasosotra ny olona sasany, maniry fatratra ny sira.
Manazava ny fomba iraika ambin'ny folo. Tsy fanarahan-dalàna. Noho izany, ny olona mandeha amin'ny fitohanana ka hatrany amin'ny soritr'aretin'ny IBS, amin'ny toerana isan-karazany.
Azo antoka fa vokatry ny tsy fisian'ny electrolytes io. Ny fivontosana amin'ny kitrokely sy ny hatotan-tanana, io dia tsy fahampian'ny electrolyte aorian'izay miaina. Mieritreritra fofonaina marivo na haingana isika.
Tena mahafinaritra izany, ary iray amin'ireo zavatra raisintsika ho azy fa miaina ara-dalàna matetika isika, fa ny olona tsy ampy herinaratra kosa dia toa manadino ny fofonaina na very ny gadon'izy ireo. Noho izany dia ho hitanao fa miaina fofonaina tsy dia lavitra loatra ianao, ary tsy maharitra, fa handalo fofona mitovy amin'izany ianao, fofonaina lava be na fofonaina haingana be ary avy eo dia manomboka mieritreritra ianao, aona inona no hadinoko nifoka ary avy eo mifantoka amin'ny fisefosefo ianao , manainga, fa tena tsy fantatrao hoe maninona no olana aminao izy io. Eny tokoa, olana tsy fahampian'ny electrolyte izany.
Ka ireo no zavatra rehetra manelingelina ny fiainanao matetika. Midika izany fa izaho manokana dia nanana olana tamin'ny fiakaran'ny tosi-dra, na dia nifady hanina aza aho dia nitombo ny tosidrako. Toy izany koa, nifandray tamin'ny electrolytes izy io.
Ary noho izany, ireo soritr'aretina samihafa rehetra eto dia mety ho olana lehibe rehefa tafiditra ao amin'ny tsy fahampian'ny electrolyte lehibe ianao, ary avelao aho hiteny aminao, mahatsiaro mahatsiravina ianao, mahatsapa mahatsiravina ny fanatanjahan-tena, mahatsapa mahatsiravina ny zava-drehetra amin'ny tsy fahampian'ny elektrolit, koa ahoana no ahatongavanao mihemotra izy ireo? Ka voalohany indrindra, azonao atao ny mandray multivitamin izay misy an'ireny electrolytes samihafa ireny, izay matanjaka, sa tsy izany? Tsy ampy ho ahy izany. Ny zavatra hafa azonao atao dia ny mampitombo ny fihinananao sira ao anaty ranomasina, izay misy electrolytes tsara. Tsy ampy ho ahy koa izany, ary tsy afaka nihinana sira ampy aho mba hahazoana ny haavony nilaiko.
Fantatrao, tamin'ny fotoana nampiasako ranom-boasarimakirana, izay no nanolorana anao ho azy, karazana hafetsen'ny atleta ity. Raha manao karazana fiaretana ianao, ranom-boankazo fa ny fikarohana dia manaporofo antsika ankehitriny fa tsy mandaitra amiko tanteraka ny ranom-boasimoka. Haka vovoka aho.
Ampifandraisiko izay ampiasaiko amin'ny famaritana etsy ambany. Io dia herinaratra / fisotroana angovo ary ampiasaiko ho fanazaran-tena mialoha, saingy ampiasako mandritra ny andro ihany koa mba hanomezana hery ny tenako ary zava-dehibe indrindra hampiakarana ny haavon'ny electrolyte ahy satria azoko lazaina aminao fa vitamina be raisina ianao ary koa mihinana sira an-dranomasina be dia be ary manao ny sasany amin'ireny fomba tsy mitovy amin'ny tartarasa potasioma avo ireny, tsy dia ampy ho ahy izany rehefa nanao kardio sy nanao fanazaran-tena ketogenika sy ireo zavatra hafa rehetra aho. Ka tsy maintsy ampiako ihany na izany aza.
Betsaka ny olona no tokony hanampy an'izany, na dia nihevitra aza izy ireo fa tsy hoe mahatsapa tena tsara kokoa noho ny lahatsoratra tsy fahampian'ny electrolyte sy sakafo iray isan'andro satria izany no olana mahazo ny olona mifady hanina na mifady fotoana mifady fotoana. Raha te hijery ity lahatsoratra ity ianao dia ataovy eto. Izaho dia mitanisa soritr'aretina hafa vitsivitsy izay atrehan'ny olona mialoha ary omeny ankihiben'ity lahatsoratra ity.
Mizarà amin'ny namanao satria raha tsy ampy herinaratra izy ireo dia afaka manome toky aho fa hahatsapa ho mahatsiravina izy ireo. Azonao atao ihany ny tsy mahazo aina amin'izany. Raha tsy izany, misoratra anarana amin'ny fantsoko, jereo ireo lahatsoratra hafa momba ny fifadian-kanina sy ny ketosis tsy tapaka eto, ary avy eo dia ho hitanay ianao amin'ny lahatsoratra manaraka.
Inona avy ireo soritr'aretin'ny tsy fifandanjan'ny electrolyte?
iraisanasoritr'aretinaan'ny anelectrolyteny fikorontanana dia:
fitepon'ny fony tsy ara-dalàna.
fitepon'ny fo haingana.
fikorontanana na fanintona.
fivalanana na fitohanana.
tongasoa eto amin'ny resaka MedCram iray hafa, hiresaka momba ny hyperkalemia hyperkalemia isika toy ny zavatra hafa rehetra mifarana amin'ny e mia mifandraika amin'ny ra ary ny k, raha tadidinao avy amin'ny latabatra maharitra, dia misy ifandraisany amin'ny potasioma, dia toy izany koa isika Miresaka momba ny potasioma avo ao amin'ny rà izy ary amin'ny ankapobeny dia lehibe noho ny 5.0 izany fa ny ambony kokoa kosa dia vao mainka miharatsy ny soritr'aretina ka ny elanelana mahazatra ho an'ny potasioma dia manodidina ny 3.5-5.0 ity dia rafitra voafehy tsara tokony hatao voafehy tsara ao anaty ra ary ny anton'izany dia ny rafitra fampidinana ao am-po ary koa amin'ny hozatra dia miankina betsaka amin'ny potasioma mamakivaky ny membrane, ary noho izany dia avo dia avo ny fitaritana ny potasioma, ka misy olana amin'ny fifantohana ny potasioma ivelan'ny sela dia tena hisy fiatraikany amin'ny fanimbana ireo sela ireo ary ny tsy fahampian'ny potasioma dia handona mafy ny fony ary hiteraka arrhythmia, ary izany no mahatonga ny vatana hifangaro Miorina amin'ny fiarovana ny haavon'ny potasioma mba hiresahantsika ny antony mahatonga ny hyperkalemia, ny fisehoan'ny hyperkalemia, ary ny fomba hitsaboana hyperkalemia Okay ka andao hiresaka ny antony.
Ny antony voalohany dia ny famotsoran-keloka tafahoatra na ny fiovan'ny transcellular okay ka andao hiresaka ny antony mety ho toy ny diabeta ohatra. Tadidio izay mitranga amin'ny diabeta dia misy glucose betsaka manodidina ny sela ka manana sela eto ianao ary manana glucose ao ivelan'ny sela ary mahatonga ny rano hiala amin'ny sela ary ho an'ny zavatra antsoina hoe coronation dia mihena izy io ary rehefa mitranga izany ny fifantohan'ny potasioma izay efa be ao anaty sela dia hiakatra ary izany dia mahatonga ny potasioma hivoaka avy ao anaty sela ary ny diabeta dia misy insuline, izay tsy fahita firy amin'ireo diabeta karazana 1 ary ny insuline dia tompon'andraikitra amin'ny fitondrana potasioma tsara ao anatiny ny sela, izany Ny fanamarihana iray manan-danja dia ny insuline mahatonga ny potasioma hiverina ao anaty sela ary ho lasa marary. Raha voan'ny diabeta ianao dia avo ny glucose ao aminy, izay ratsy amin'ny farany, dia mitarika amin'ny fivoahan'ny potasioma avy ao anaty sela, satria tsy misy insuline, dia tsy azo averina amin'ny sela izy io.
Ny vokany iray hafa dia ny antsoina hoe HH, na Hypo, izay tokony hampirisika ny kort adrenal hamokatra aldosteron, fa ny tena izy dia tsy mahazo hypo-aldosteron ianao. Aza adino fa ny aldosteron dia miasa amin'ny tubule mifangaro volo ary mahatadidy izay ataony izay miteraka fivoahan'ny potasioma sy ny fitrohana ny sodium amin'ny tubules mifangaro manodidina, koa raha tsy manana aldosteron ianao dia hivoaka amin'ny zona glomerulosa an'ny adrenal cortex ianao ' hahazo potasioma poti-anaty ao anaty ron-kena aho. Ny antony anaovako azy ireo dia ny hoe Hypo-Renick-Hypaldosteronism dia azo jerena miaraka amin'ny diabeta, noho izany antony iray fotsiny amin'ny hyperkalemia, ny antony manaraka dia miharihary ary izany dia fampitomboana fotsiny ny potasioma p mba fantatrao izay potasioma misy ary ny sasany amin'ireo zavatra misy potasioma dia soloinay sira.
mety tsara ho anao ny sushi
Raha tokony hanana ny sodium cation ianao, izay misy ny potasiôna potasioma, ny zavatra hafa hitanao dia ny fihoaram-pefy tafahoatra amin'ny tsy fahombiazan'ny voa amin'ireo olona mijaly amin'ny tsy fahombiazan'ny voa ireo dia matetika ireo izay manana mpisolo sira ao amin'ilay potasioma izay tsy nesorina afaka . Ilay iray hafa noresahintsika, raha tsy manafina aldosterona ny adrenal zona glomerulosa, dia hahita tsy fahombiazan'ny adrenal ianao, raha misy ny olana amin'ny fihary pituitary ny tsy famporisihana ny cortex adrenal, ny aldosteron dia mbola mivoaka amin'ny habetsaky ny vola mety azonao tsy manana hyperkalemia See amin'ny zavatra hafa izay ho hitanao amin'ny tsy fahampiana adrenal, toy ny hypoglycemia, hyponatremia, ary acidosis metabolika. Ny zavatra farany ho hitanao, mazava ho azy, dia amin'ny diuretic potassium fitsitsiana.
Ohatra sasany amin'izany ny spironolactone na ny miller. Efa niresaka momba ireo izay tokony ho fantatrao momba ny ACE inhibitors izahay. Aza hadino izany fa ny mpanakanana ACE dia manakana ny switch, ny angiotensin mampiova anzima hita ao amin'ny havokavoka izay misy fiatraikany amin'ny fahafaha-manao aldosteron, ka miresaka momba ny fitsaboana agonista beta avy eo, fa ny beta blockers dia mety hisy fiantraikany amin'ny fiovan'ny potasioma ary tena mahatonga azy io hivoaka nivoaka ny sela.
Ny antony iray hafa dia zavatra mahaliana ary antsoina hoe pseudo-hyperkalemia izy io ary tena miorina amin'ny hoe ny sela rehetra ao amin'ny vatana dia manana potasioma marobe ao anatiny ka jereo ity raha manana marary manana sela maro ianao izay manana dra. Raha nanamarika ny leukositosis na ny trombositosis ianao dia ao anaty platelets ihany koa izy ireo ary mahazo fofona ao amin'ny fantsom-panadinana ianao izay mahatonga ireo sela ireo hivoaka sy hamoaka ny potasioma rehefa mitarika azy ireo amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny laboratoara ianao, mitombo ny potasioma ary lasa miteny aminao izy ireo indraindray rehefa mahita an'io izy ireo dia miteny hoe hemolisis ary raha sendra hyperkalemia ianao ary lazain'izy ireo fa telo plus ny hemolisis dia mety tsy maintsy maka izany ianao amin'ny voan-sira, raha azo lazaina, ary angamba avereno indray ny fitsapana hahitanao ny ra sy manaova sary indray mandeha satria misy lysis olombelona dia tena mila manao ra hafa ianao amin'izany santionany Eny ary, andao hiresaka ny fisehoan'ny hyperkalemia, ny zavatra hitranga dia tena misy ifandraisany amin'ny fo ary ny antony dia satria ny fitondran-tena ny potasioma amin'ny famongorana ny sela fampidiran-tsaina dia avo dia avo, hany ka mandao ny sela foana ny potasioma ary inona no mitranga dia manana fiampangana tsara ianao mamela ny sela sela ho tsara inona no hataoko? Izaho dia hanao izay ateraky ny sela ho ratsy ary izany indrindra no hitantsika eto ambany hatramin'ny 90 Millivolts. Manana izany ratsy izany ianao.
Ny olana eto dia ny fanananao potasioma be dia be ao amin'ny vahaolana sela ao anaty serum, amin'ny teny hafa raha manana hyperkalemia ianao dia tsy hiala haingana ny sela ireo ion-potasioma ireo, ary na dia sela be fiampangana be aza ianao dia tsy tezitra mafy ianao fa mahazo ilay antsoina hoe débolarization, noho izany ireto sela ireto dia mihalalaka kokoa ary tsy vitan'ny déolarized fotsiny, fa raha tokony ho tic maranitra tsara dia miadana ary mihalefaka kely ny fanavaozana azy io raha mahazo iray ianao raha manana Dis-P-onja, ho hitanao aloha fa ny P-alon dia saika tsy misy, ny R-onja dia hipoitra mora foana. Hanana izany famoizam-po izany ianao ary avy eo ity T-onja ity ary ho toa sinusoida izy io ary mazava ho azy ho hitanao fa rehefa misy olona dimy na dimy eo amin'ny toby dia avo kokoa ny potasioma ary haingana kokoa ny haavon'ny K alium dia enina izy ireo mankanesa any amin'ny fito, tsy ho hitanao ireo fiovana ireo satria mety hanana fotoana hanovana ny vatana, fa raha misy olona miaina ao anatin'ny telo s roa efatra dia avy eo mitsambikina hatramin'ny fito ianao dia mety hahita ilay zavatra voalohany ho hitanao hyperkalemia dia ny fahitanao ny onja T, okay ity no zavatra voalohany ho hitanao ary avy eo amin'ny fotoana sasany dia ho hitanao ity zavatra mandeha amin'ny sinusoidal ity ka ho mora izany ary mandehana ary hiditra amin'ny fisamborana kardia ianao ka izay tokony Fantaro ny fisehoana anananao déolarization noho ny ambany noho ny fitehirizana ny potasioma mahazatra ary aorian'izany dia mahazo hyperpolarization ianao noho ny fantsom-panafody sodium tsy mihetsika dia nampihena ny hafainganam-pandeha noho ny aotra dia lasa iray ianao Nampihena ny fientanan'ny membrane ary avy eo ianao dia mahazo fitomboan'ny fitarihana potasioma sy fanavaozana haingana eh, ka inona no tokony ho fantatrao, inona no tena hitsapana ny hyperkalemia amin'ny fitsapana? Heveriko fa ny zavatra hizahan'izy ireo toetra anao dia laharana voalohany, tsy misy t-onja no famantarana voalohany hahitanao ny laharana roa rehefa tonga avo dia avo izany. Mahazo an'io onja io ianao ary ny hyperkalemia isa telo amin'ny ankapobeny dia hisy fiantraikany amin'ny fo ary izany rehetra izany dia vonjy taitra, ankehitriny ao amin'ny lahatsoratra manaraka.
Hiresaka momba ny fitsaboana hyperkalemia isika ary ny sasany amin'ireo antony mahatonga an'io fitsaboana io
Inona ny electrolyte mandeha amin'ny potasioma?
Amin'ny maha ionona ivelan'ny sela azy indrindra, ny sodium dia miasa miarakapotasioma(izay intracellular voalohany indrindra) hitazonana ny fandanjana ara-dalàna nyelectrolytesao amin'ny tsiranoka intracellular sy extracellular amin'ny alàlan'ny sodium-potasiomapaompy, rafitra fitaterana miasa. (Jereo ny fomba sodium-potasiomamiasa paompy.)
Inona ireo electrolytes 5?
Ny sôdiôma, kalsiôma, potasioma, klôroza, fôfôdôma ary maneziôma dia izy rehetraelectrolytes.
Hey Profesora Dave, andao hiresaka momba ny electrolytes. Izay mpankafy zava-pisotro ara-panatanjahantena dia efa nandre ny teny hoe electrolyte, fa inona no tena dikan'io teny io? Io voambolana io dia manondro akora iray izay, rehefa levona anaty rano, dia misaraka amin'ny ion-tsolika miiba sy miiba ary manana fahaizana miteraka famongorana herinaratra. Ny singa iray izay tsy misaraka ho lasa ion rehefa levona anaty rano dia tsy afaka mitondra herinaratra ary antsoina hoe tsy electrolyte.
Arakaraky ny fisarahana ny singa iray, ny matanjaka sy ny electrolyteitis, noho izany rehefa mandinika karazana electrolytes isan-karazany isika dia andao hifantoka amin'ny fahombiazan'ny dissociation. Rehefa misaraka tanteraka ny vahaolana ao anaty vahaolana dia electrolyte mahery izy io ary mitondra herinaratra tsara amin'ny vahaolana, midika izany fa misy sombintsombiny misaraka ary ny sasany kosa tsy, izany dia antsoina hoe electrolyte malemy izay mbola mitarika herinaratra y fa tsy toy ny electrolyte mahery . Ary araka ny nolazaiko, ny zavatra tsy misaraka mihitsy dia tsy electrolyte.
Azontsika atao ny manasokajy ny akora ho iray amin'ireo zavatra telo ireo amin'ny fandrefesana ny fitaritana herinaratra amin'ireo vahaolana aqueous mifanaraka aminy. Mba hitantanana herinaratra, ny akora iray dia tsy maintsy mirakitra karazana mihetsiketsika malaky, toy ny tariby vy, izay ahafahan'ny elektrôna mihetsika malalaka. Ao anaty vahaolana, ireo karazan-javamaniry mihetsiketsika mihetsika malalaka ireo dia iôna noforonina rehefa nesorina ny fanafody.
Arakaraky ny isan'ny ion ao anaty vahaolana, ny avo kokoa ny conductivity ary ny electrolyte dia matanjaka kokoa, ary afaka refesintsika ny fikorianan'ny ankehitriny na mijery fotsiny ny famirapiratry ny bolam-by ao amin'ny faritra mba hanangonana izany karazana data izany. Andao sokajina lavitra kokoa ny electrolytes. Ka zavatra toy ny potassium chloride no hisaraka tanteraka, noho izany dia electrolyte mahery.
Ohatra iray amin'ny electrolyte ionic koa izy io. Ireo dia ionic compound izay misaraka amin'ny cations sy ny anion ao anaty vahaolana aqueous. Ny famafana dia mitranga satria ny cations sy ny anion dia afaka mifandray amin'ny molekiola amin'ny rano izay mamorona solvent, ary io fitahirizana angovo io miaraka amin'ny fikorontanan'ny vahaolana amin'ny alàlan'ny ionic solid solidaly dia miteraka fisarahana tampoka.
Nozaraina tao anaty vahaolana ny ion mba hanamafisana ny famahana; H. mba hanamafisana ny fifandraisana ion-dipole izay mitranga amin'ny alàlan'ny famelana molekiola rano maro hifaneraserana amin'ny ion tsirairay avy araka izay azo atao. Izany no hitranga amin'ny ankamaroan'ny vatan'ny ionic, ka izany no mahatonga ny solika ionic, na misy ion monatomika na ion polyatomika, dia mazàna ho elektrolita mahery.
Ny asidra acetic, asidra malemy, dia tsy hiaraka afa-tsy amin'ny ampahany, noho izany dia electrolyte malemy. Ity koa dia ohatra iray amin'ny electrolyte covalent satria ny molekiola dia misy fatorana covalent ary, tsy toy ny solika ionic, ireo karazana covalent ireo dia tena mizaka ny valin'ny simika miaraka amin'ireo molekiola misy solvent ao anaty vahaolana hamoronana vokatra voaloa. Ireo dia asidra mahery sy bases mahery izay mety manome proton amin'ny molekiola rano na manala proton avy amin'ny molekiola rano.
Ohatra, hydrogen chloride dia fitambarana kovaline. Tsy misy sombiny voarohirohy ara-dalàna amin'ity akora ity fa ny atôma tsy miandany. Fa rehefa levona anaty rano izy io dia mivadika asidra hydrochloric, izay asidra mahery ary mamindra tanteraka ny proton rehetra ao anaty molekiola ao anaty, ary miteraka ion-hydronium sy iôna klôroida.
Midika izany fa misy ny ion amin'ny vahaolana azo heverina ho electrolyte mahery ka mitondra herinaratra. Ny solvent dia mitana andraikitra lehibe amin'izany, satria mba hahafahan'ny asidra hydrochloric hamoaka proton dia misy zavatra tsy maintsy mandray an'io proton io, koa raha ny asidra hydrochloric dia ao anaty solvent aprotic toy ny etera na hexane dia tsy hitarika electrolytic izany. vahaolana, satria tsy afaka mandray proton toy ny molekiola rano ireo solvents ireo. Nefa amin'ny vahaolana aqueous dia tokony hotadidintsika fa ny asidra sy ny bases mahery dia electrolytes matanjaka satria mihatra tanteraka amin'ny vahaolana izy ireo, raha ny asidra sy ny bases malemy kosa, toy ny asidra acetic, dia mihena ihany ny ampahany ary noho izany dia misy electrolytes malemy satria kely ny fatran'ny ions ao aminy. amin'ny famokarana vahaolana.
Rehefa dinihina tokoa, ny zavatra toy ny etanol dia tsy misaraka saika mihitsy ka tsy mamokatra herinaratra, manao azy ho tsy electrolyte. Izany dia satria tsy misy asidra na fototr'asa horesahina, noho izany dia tsy azo tsinontsinoavina ireo fanehoan-kevitra raisina amin'ny molekiola rano. Toy izany koa ny amin'ny siramamy, sy ireo fitambaran-kovalona maro hafa na fitambaran-iôlôma tsy zakan'ny rano.
Tianay antoka fa afaka mamantatra ireo zavatra simika ho toy ny electrolytes mahery, electrolytes malemy, na fahatakarana tsy electrolytes ck.
Mety ve ny misotro electrolytes isan'andro?
Raha nyelectrolytelasa avo loatra na ambany loatra ny haavon'ny, mety hipoitra ny fahasarotana lehibe.Electrolyte isan'androary ny fatiantoka tsiranoka dia mitranga voajanahary amin'ny hatsembohana sy ireo vokatra fako hafa. Noho izany, zava-dehibe ny famenoana tsy tapaka azy ireo amin'ny sakafo manankarena mineraly.
Inona no mitranga rehefa ambany potasioma ny vatanao?
nypotasioma ambanyNy ambaratonga dia manana antony maro fa matetika dia vokatry ny fandoavana, fivalanana, aretin-kozatra adrenal, na fampiasananydiuretika. nypotasioma ambanyNy haavon'ny haavony dia mety hahatonga ny hozatra hahatsapa ho malemy, mavesatra, mikitroka, na lasa malemy mihitsy aza, ary mety hipoitra ny gadona fo tsy ara-dalàna.
Inona no tsapan'ny potasioma ambany?
Famantarana sy soritr'aretina mahazatra an'nypotasiomany tsy fahampiana dia misy ny fahalemena sy ny havizanana, ny hozatry ny hozatra, ny hozatry ny hozatra ary ny hamafiny, ny fikorontanana sy ny tsy fahatomombanana, ny aretim-po, ny fahasosoran'ny fisefoana, ny soritr'aretina fandevonan-kanina sy ny fiovan'ny toetr'andro
Azonao atao ve ny manamarina ny haavon'ny potasioma ao an-trano?
Vidiny haingana, marina ary ambanyfitsapanaho an'ny rahaavon'ny potasioma, izayafakaampiasaina amin'nyan-tranoary manana ny fahafaha-manatsara ny fiarovana, ny fahasalamana ary ny fomba fiainan'ny olona am-polony tapitrisa manerantany, novolavolain'i Kalium Diagnostics.25. 2019.
Betsaka ve ny potasioma ao amin'ny kafe?
Telo ka hatramin'ny efatra kaopy an'nykafeandro iray no dinihinabe potasiomaary afaka mampiakatra ny anaopotasiomaambaratonga. Ny fampidirana crème na ronono dia mety hampiakatra bebe kokoa ny anaopotasioma kafeatiny. Misotro latsaky ny telo kaopykafe/ andro dia heverina ho azo antoka amin'ny ankapobeny.02.25.2021
Inona no hitranga raha ambany loatra ny potasioma anao?
nypotasioma ambanyNy ambaratonga dia manana antony marobe nefa matetika dia vokatry ny fandoavana, fivalanana, aretin-kozatra adrenal, na ny fampiasana diuretika. nypotasioma ambanyNy haavon'ny haavony dia mety hahatonga ny hozatra hahatsapa ho malemy, mavesatra, mikitroka, na lasa malemy mihitsy aza, ary mety hipoitra ny gadona fo tsy ara-dalàna.
Ahoana no ifandraisan'ny potasioma amin'ny tsy fifandanjan'ny fluid sy electrolyte?
Tsy fifandanjan-drano sy herinaratra. Potasioma. Ny potasioma no electrolyte lehibe ao amin'ny efitrano anatiny ary, toy izany, mitazona osmolality ICF. Ny potasioma dia miasa miaraka amin'ny insuline hamindrana glucose ao anaty sela, fehezin'ny paompy Na + / K +, ary mandray anjara amin'ny famonoana voa.
inona no ilana ovy
Inona no andraikitry ny potasioma sy ny sodium amin'ny vatana?
Ny potasioma sy ny sodium dia electrolytes ilain'ny vatana hiasa ara-dalàna ary manampy amin'ny fitazonana ny tsiranoka sy ny fatran'ny rà ao amin'ny vatana.
Karazana electrolytes inona avy no tsara azo ampiasaina?
Amin'ny ankapobeny, ny fandaniana electrolytes (mineraly misy herinaratra, anisan'izany ny manezioma, potasioma, ary ny sodium), dia mety hanampy rehefa miasa mandritra ny fotoana maharitra ianao, amin'ny hery lehibe.